Home » သတင္းေၾကျငာခ်က္ » မိုဟာမက်အလီ၏ဘဝ
မိုဟာမက်အလီ (1942 Classius ရွှံ့စေးမွေးဖွား - 2016) တစ်ခု 1960 အတွက်အိုလံပစ်ရွှေကို medalist နှင့် 1964 ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိအနီနှင့်အဖြူ Schwinn ဆိုင်ကယ်အခိုးခံရသူတစ်ဦးလက်ဝှေ့နည်းပြခဲ့တဲ့ရဲဂျိုးမာတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခါလက်ဝှေ့သူ့ရဲ့ခရီးစတင်ခဲ့သည်။
မိုဟာမက်အလီရဲ့ဘဝတစ်ဒဏ္ဍာရီ၏တိုတောင်းသောဘာမျှမခဲ့သဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော infographic ကိုကြည့်ပါ www.senseornosense.com သူ့တစ်သက်တာ၏အကြီးမားဆုံးသောအချိန်လေးပါ။ မိမိအစက်ဘီးသေခံတော်မူသည်တိုင်အောင်မခိုးယူခဲ့အချိန်ကနေဒီ infographic လှလှပပဇယားသည်မိမိအသက်တာကို။
အကြီးမြတ်ဆုံး၏စကားမှာ "တဲ့ပျားများကဲ့သို့နစ်နာမှုတစ်ခုလိပ်ပြာနဲ့တူ Float လုပ်မလဲ"
by: infographic http://www.senseornosense.com/life-muhammad-ali/
ဇြန္လ 13, 2016 FitnessRebates သတင္းေၾကျငာခ်က္ မှတ်ချက်မရှိ
Bowflex သတိရအောက်မေ့နေ့ 2016 ရောင်းမည်
$ 40 များအတွက်ရောင်းချခြင်းအပေါ် Lecheek အာဟာရ StimShot Preworkout 25.95 စားသုံးခြင်း
တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave	ပြန်ကြားချက် Cancel
ကနေနေ့စဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးအပေးအယူများနှင့်အတူအဆီ, ကြွက်သား Build, & Save ကိုငွေ Burn ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း.
ကျနော်တို့ကိုသင်ထိပ်တန်းကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းဖြည့် & လေ့ကျင့်ခန်းပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ငွေ Save ကိုကူညီပါဖို့ဤတွင် Are ။ ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်ရေးကူပွန် & အပေးအယူများထွက် Source ။ သင်, ဖြည့်အပေါ် treadmill, elliptic, ပင်မစာမျက်နှာ gyms, လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး, အားကစားရုံအဖွဲ့ဝင်, လေ့ကျင့်ခန်းဒီဗီဒီ, & ပိုငွေကို Save ပါလိမ့်မယ်။ လူမှုအပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းနှင့်နေ Facebook က & တွစ်တာ။ နောက်ဆုံးထွက်ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများဘို့ငါတို့ဘလော့ပုဒ်မထွက်စစ်ဆေးပါ။ တတ်နိုင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း ebay မှာအခုဆိုရင်ရှိနိုင်လေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်အထည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားကစားရုံအင်္ကျီ $ 1.99 Plus အားသင်္ဘောအဖြစ်အနိမျ့များအတွက်ရရှိနိုင်များမှာ!
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း Recent Posts
မတ်လ 2019 နယူး Balance ကူပွန်: အဝတ်အစား + အခမဲ့သင်္ဘောဟာ Off 10% ကိုရယူလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့အခမဲ့တဏှာ cheat sheet လမ်းညွှန် Download
Kaelin Poulin ရဲ့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Kickstarter လမ်းညွှန်အခမဲ့ Download လုပ်!
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 အမေဇုံဖြည့်စွက်ကူပွန်: မစ္စတာ Hyde ဟာ Off 15% ကိုရယူလိုက်ပါ
14 နေ့ Keto စိန်ခေါ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း
Savings.Com နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး & Fitness နယူးနှစ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို Save
သင့်ရဲ့အခမဲ့ Keto သကြားလုံးကြော်စာအုပ်တောင်းဆို
20 အပတ်အစားအသောက်ကူပွန် Code ကိုပိတ် 1%
Reebok 2018 ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ကူပွန်: 50% ဟာ Off Sitewide Get
သင်္ဘောများအတွက်သင်၏အခမဲ့ခါးလောက်ညှပ်လိုက်ရုံ Pay ကိုတောင်းဆို
သင့်ရဲ့အခမဲ့ NatureThin စမ်းသပ် Bottle သဆိုကြသည်
အစိမ်းရောင်ဖျော်ရည်အခမဲ့ eBook ဒေါင်းလုပ်ရန်နိဒါန်း
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ 1 အပတ်အစားအသောက် (1)2အပတ်အစားအသောက် (1) 24 နာရီကြံ့ခိုင်ရေး (3) A1Supplements (5) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (5) adidas (2) ချိန်ညှိ Dumbbells (3) အံ့သြဖွယ် eBook Store ကို (3) အမေဇုံ (39) Amrion (1) အချိန်မရွေးကြံ့ခိုင်ရေး (1) Beachbody (11) Black ကသောကြာနေ့ (16) ဘလော့ (15) သုံးသပ်ချက်များ (1) Bodybuilding.com (2) Bodybuilding.com ဗြိတိန် (1) စာအုပ် (5) ရုက္ခဗေဒရွေးချယ်မှု (2) Bowflex (46) ကနေဒါ (5) Treadclimber (17) BPI အားကစား (2) BulkSupplements.com (2) သမဝါယမ-1 အလေးချိန်ရရှိ (2) ရာစု MMA မှ (1) လိမ္မာပါးနပ်သောသင်တန်း (4) အဝတ်အစား (14) ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း (10) Hoodie (4) T-shirt (6) ရွှေရဲ့အားကစားရုံ (1) Cosmobody (1) Creatine (2) ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ (2) နေ့စဉ် Burn (1) အစားအသောက်တိုက်ရိုက် (1) အစားအသောက်-to-Go ကို (2) Drugstore.com (3) Dukan Diet (1) ဒီဗီဒီ (15) ကို eBay (4) ebook (16) elliptic (8) Freemotion (1) Proform (4) ချောချောမွေ့မွေ့ (2) Yowza (1) eSportsOnline (1) လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ် (5) Proform (4) Schwinn (1) (2) Spinning (1) ဖြောင့်မတ် Facebook က (1) ကို T-Shirt Giveaway (1) အဆီ Burner (6) ဖခင်များနေ့ (1) Finish ကို LINE (3) ကြံ့ခိုင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ (1) Footaction (3) Footlocker (3) အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ (31) Gaiam (3) gander တောင် (1) Garcinia စုစုပေါင်း (1) Giveaway (17) Groupon (2) အားကစားရုံဧည့်သည် (2) ကျော်ပြီ မင်္ဂလာအီစတာ (3) hCG အစားအသောက် (1) နှလုံး rate monitor (6) Garmin (2) ဝင်ရိုးစွန်း (1) Timex (2) ကြိုးမဲ့ရင်ဘတ်သိုင်းကြိုး (1) မူလစာမျက်နှာ gyms (2) မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကြံ့ခိုင်ရေး (4) အာဟာရ၏အိမ် (1) IVL (5) စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဂရင်း (3) ဂျိုးရဲ့နယူး Balance စက်ရုံပြင်ပ (1) K-Mart မှာ (1) ကယ်လီရဲ့အပြေးဂိုဒေါင် (2) Keto (2) အလုပ်သမားနေ့ (1) ဘဝကကြံ့ခိုင်ရေး (1) မဂ္ဂဇင်းများ (1) သတိရအောက်မေ့နေ့ (4) Misfit (3) MMAWarehouse (3) MODEL (2) မိခင်၏နေ့ (1) ကြွက်သား & အစွမ်းသတ္တိ (4) NASM (1) နယူး Balance (4) နယူးအရေးပါသောအ (1) Nike က Store ကို (1) အာဟာရ Supps (1) Paleo စီမံကိန်း (2) pedometer (1) Fitbit (1) PersonaLabs (1) pre-လေ့ကျင့်ခန်း (12) နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့နေ့ (1) ပရင့်ထုတ်ရန်အကူပွန် (3) Proform.com (7) ProHealth (1) Prohormones (1) Prosource (5) ပရိုတိန်း (9) ကြွက်သားနို့ (3) ပြူရီတန်ရဲ့မာန (1) အရည်အသွေးကနျြးမာရေး (4) Reebok (8) သုံးသပ်ချက် (1) လှေလှော်စက်များ (2) Sears (2) Shaker ဖလား (1) FitnessRebates.com (1) ဖိနပ် (13) Shoes.com (1) Slendertone (1) ချောမွေ့ကြံ့ခိုင်ရေး (8) တစ်ဦးတည်းသောကြံ့ခိုင်ရေး (1) တောင်ပိုင်းသဲသောင်ပြင်အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှု (1) Spafinder (1) Spartan လူမျိုး (5) အားကစားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် (1) ခိုင်ခံ့ကြွ Wear (1) ခိုင်မာတဲ့ဖြည့်စွက်ဆိုင် (1) စူပါဖြည့် (1) ဖြည့်စွက် (33) SupplementsToGo (4) Suzanne Somers (1) တင်ရေး (1) စုစုပေါငျးအားကစားရုံ (2) treadmill (16) မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း (1) ကောင်းမှုကုသိုလ် (1) ဖီးနစ် (1) Precor (1) Proform (6) Reebok (1) ချောချောမွေ့မွေ့ (2) ဝါး (1) Weslo (2) တွစ်တာ (4) Duffel Bag Giveaway (1) ကို T-Shirt Giveaway (3) တုန်ခါမှုပလက်ဖောင်းစက်များ (1) ဗွီဒီယိုဂိမ်း (1) Vitalicious (1) VitalMax (1) ဗီတာမင် Shoppe (3) ဗီတာမင်ကမ္ဘာ့ဖလား (3) Weider (2) လေ့ကျင့်ခန်း (1) Workoutz.com (1) ယောဂဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (4) YogaDirect (1) Yowza ကြံ့ခိုင်ရေး (1) Zumba (5)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေးအယူများခံစားကြည့်ပါ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပံ့ပိုးကူညီပါ! ယနေ့တွင်လှူဒါန်း
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မတ်လ 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 ဇန်နဝါရီလ 2019 နိုဝင်ဘာလ 2018 အောက်တိုဘာလ 2018 စက်တင်ဘာလ 2018 သြဂုတ်လ 2018 ဇြန္လ 2018 ဧပြီလ 2018 မတ်လ 2018 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 ဇန်နဝါရီလ 2018 နိုဝင်ဘာလ 2017 အောက်တိုဘာလ 2017 မေလ 2017 ဧပြီလ 2017 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 ဇန်နဝါရီလ 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 နိုဝင်ဘာလ 2016 အောက်တိုဘာလ 2016 စက်တင်ဘာလ 2016 ဇူလိုင်လ 2016 ဇြန္လ 2016 မေလ 2016 ဧပြီလ 2016 မတ်လ 2016 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 ဇန်နဝါရီလ 2016 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2015 နိုဝင်ဘာလ 2015 အောက်တိုဘာလ 2015 စက်တင်ဘာလ 2015 သြဂုတ်လ 2015 ဇူလိုင်လ 2015 ဇြန္လ 2015 မေလ 2015 ဧပြီလ 2015 မတ်လ 2015 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 ဇန်နဝါရီလ 2015 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2014 နိုဝင်ဘာလ 2014 အောက်တိုဘာလ 2014 စက်တင်ဘာလ 2014 သြဂုတ်လ 2014 ဇူလိုင်လ 2014 ဇြန္လ 2014 မေလ 2014 ဧပြီလ 2014 မတ်လ 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 ဇန်နဝါရီလ 2014 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2013 နိုဝင်ဘာလ 2013 အောက်တိုဘာလ 2013 စက်တင်ဘာလ 2013 သြဂုတ်လ 2013 ဇူလိုင်လ 2013 ဇြန္လ 2013 မေလ 2013 ဧပြီလ 2013 မတ်လ 2013 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 ဇန်နဝါရီလ 2013
entries RSS ကို
မှတ်ချက်များ RSS ကို
Privacy & ကွတ်ကီး: ဤ site ကို cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ပိုပြီးထွက်ရှာရန်အဖြစ်ကဤဖယ်ရှားလိုက်ပါသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ရန်မည်သို့မည်ပုံဒီမှာတွေ့မြင်: ကျွန်ုပ်တို့၏ Cookie ပေါ်လစီ
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း မူပိုင်ခွင့်© 2019 | theme: မဂ္ဂဇင်းစတိုင် စွမ်းအားဖြင့် WordPress ↑
Email လိပ်စာမှ Send နာမည္ထည့္ရန္ အီးေမလ္လိပ္စာထည့္ရန္ Cancel
Post ကိုစလှေတျတျောမခဲ့ - သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစစ်ဆေး!
အီးမေးလ်ကို check ပျက်ကွက်, ကျေးဇူးပြု. ထပ်ကြိုးစားပါ
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ / Affiliate ထုတ်ဖော်: ဤ website ကို link များကိုရည်ညွှန်းနေဖန်ဆင်းတော်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းအမေဇုံန်ဆောင်မှုများ LLC Associates မှအစီအစဉ်ဆိုဒ်များကြော်ငြာနှင့် Amazon.com မှချိတ်ဆက်နေဖြင့်ကြော်ငြာစရိတ်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများများကိုဒီဇိုင်းတစ်ခု Affiliate ကြော်ငြာအစီအစဉ်တွင်တစ်ဦးပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "ကိုကြည့်ပါကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ"ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက်စာမျက်နှာ။ ကို Google, Inc တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်မဆိုကြော်ငြာတွေ, နှင့်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေဟာ cookies တွေကိုသုံးပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီ cookies တွေကို Google ကသင်၏ဒီ site ကိုမှလာရောက်လည်ပတ်သူနှင့် Google ကြော်ငြာန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါ။